Raadi Dhakhtar - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Raadi rug caafimaad ama adeeg bixiye kuu dhow.
Ka raadi khadka tooska ah ee Bixiyaha
Dhowr gujis, waxaad ka raadin kartaa liiska hadda bixiyayaasha shabakadda ee qorshayaasha Faa'idada Medicare ee CHPW. Guji badhanka si aad u furto aaladda Hel Dhaqtar. Bogga xiga, geli koodhkaaga, magaalada, ama degmadaada, iyo shuruudaha raadinta dheeraadka ah haddii la doonayo. Kadib, ku dhex wareeji natiijooyinka si aad u hesho bixiyeyaal kuu dhow.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad helitaanka bixiye ama aad su'aalo ka qabtid macluumaadka ku jira buuggan, fadlan la xiriir Adeegga Macaamiisha. Wac 1-800-942-0247 (TTY 711), laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo, toddobo maalmood usbuucii.
Fiiro gaar ah: Xubnaha CHPW Dual Plan, tusayaasha buuggayaga Bogga Tusayaasha Bixiyaha siiyaan calaamado tilmaamaya bixiyeyaasha qaata Medicare iyo Apple Health (Medicaid).
Bixiyeyaasha iyo Goobaha
Adiga oo ah xubin ka-faa'iideysiga 'Medicare' ee 'CHPW Medicare Advantage', waa in aad doorataa Bixiyaha Daryeelka Aasaasiga ah ee ku jira shabakadda si aad u hesho daryeelkaaga caafimaad. Dhammaan bixiyeyaasha ku jira diiwaankayagu waxay aqbalaan qorshayaasheena Faa'iidada Medicare si aad daryeel caafimaad ugu hesho meel u dhow guriga. Waxa kaliya ee ka reeban waa xaaladaha degdega ah ama daryeelka degdega ah ee loobaahan yahay marka shabakada la waayo (guud ahaan, markaad ka maqantahay goobta adeega), adeegyada sifeynta aagagga ka baxsan, iyo kiisaska ay ku jirto CHPW Medicare Advantage ee ogolaanaya adeegsiga dibedda - bixiyeyaasha shabakadda.
Degmooyin loo adeegay
Adeegyada CHPW ayaa bixiya gobollada soo socda ee gobolka Washington: Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, Grays Harbor, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit , Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, iyo Yakima.
Adeegyada Daryeelka Virtual Available
Waqtiyada aadan u tagi karin xafiiska dhaqtarka ama kiliinikada shaqsi ahaan, waxaad u baahan kartaa inaad tixgeliso kuweena adeegyada daryeelka dalwaddii.
Kala soo bax Diiwaan Bixiyeyaashayada
Tusaha adeeg bixiyayaashu waa liisaska dhammeystiran ee bixiyeyaasha shabakadda, takhasusleyaasha, iyo farmasiyada.
Eeg Tusaha Bixiyaha
Ma u baahan tahay nuqul adag?
Si aad u haysato nuqul ka mid ah tusayaasha adeeg bixiyahaaga oo laguu soo diray, fadlan la xiriir Adeegga Macmiilka 1-800-942-0247 (TTY 711), 8 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo, toddoba maalmood toddobaadkii.